Nsogbu siri ike-iguzogide bụ àgwà kachasị mkpa maka onye oge a. Ọ bụ ya na-enye gị ohere idi nsogbu dị iche iche na-enweghị na-emetụta ihe omume kwa ụbọchị na usoro ụjọ ahụ. Nchegbu nwere ike ime ka mmeghachi omume dịgasị iche - rashes na akpụkpọ ahụ, nkwonkwo na ahụ mgbu, migraines, gastritis, ọrịa mgbagwoju anya na ọbụna na-ebelata nkwarụ. Ọ bụrụ na ị na-ahụkarị ngosi ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa ka ị ṅa ntị nke ọma ka ị na-eguzogide nrụgide nrụgide.
Kedu otu esi eme ka nrụgide nrụgide kwụsị?
Nke mbụ, a na-edozi nsogbu nke nrụgide na-eguzogide nrụgide site na ịṅa ntị n'àgwà nke onwe ya. Elegharala nsogbu gị anya, mana dozie ha.
Dị ka ihe atụ, iji mee nke a, mgbe ụtụtụ gasịrị, jụọ onwe gị, sị: "Enwere m ike kachasị ike?", "Gịnị ka m chọrọ?", "Gịnị ka m chọrọ maka obi ụtọ?". Ị ga-enweta azịza ya. Gee ha ntị nke ọma ma soro ha: dịka ọmụmaatụ, na-alakpu ụra ma ọ bụ na-aga nri na-edozi ahụ.
Ọ bụghị ihe nzuzo na nguzogide nrụgide nke organism bụ ajụjụ ọ bụghị naanị uche, kamakwa usoro mmụta ahụ. Ọ bụrụ na ị nwetaghị vitamin D, nke ahụ n'onwe ya na-esite na ìhè anyanwụ, ahụ na-efunahụ antioxidant ma nwee ike ịda. Ọ bụrụ na ịnweghị ohere iji nweta ya ma ọ bụ solarium, rie anụ dị oke (azụ, salmon, sardines, garlic, garlic, salmon, trout, wdg) ma ọ bụ na-ewere mmanụ azụ na capsules.
Na ajụjụ nke esi eme ka nrụgide nrụgide dịkwuo mkpa, ọrụ dị mkpa na-arụ site na ike ikwurịta okwu. Emela ihe ojoo na ndi mmadu, dozie esemokwu, kwuputa ndi iro. Ihe niile a na - eme ka nchekasị, na nrụgide nrụgide nke a na - ata ahụhụ. A sị ka e kwuwe, ihe ka obere ihe na-emetụta gị, otú ahụ ka ọ na-esikwu gị ike na ọ ga-esiri gị ike ịnagide ya.
Omume maka nkwụsi ike nrụgide
Nke mbụ, ọganihu nke nkwụsi ike na-adabere n'ikike ịghara ịkwakọba nrụgide, mana iji wepụ ya. Ọ bụ ya mere isi ihe na-eme iji mepụta nrụgide na-eguzogide ga-abụ ọrụ dị otú ahụ:
dị ka a na-achị, gbanwee dị ka o kwere mee - gaa n'okporo ámá, ịgba egwu, tiri elu na eriri, wdg.
mee ihe omume ntụrụndụ, dịka ọmụmaatụ, na mpaghara nke ahụike ma ọ bụ ihe nkedo, ka nkuzi a mee ka ị nwee obi uto;
Mụta ihe ole na ole na-eku ume; nke kachasị mfe bụ iji nwayọọ nwayọọ na-adanye n'ime ihe ndekọ asatọ ma jiri nwayọọ nwayọọ na-agbanye n'ime ihe ndekọ asatọ ahụ (1 ọnụ bụ ihe dịka otu nke abụọ);
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bara uru ige ntị na ụda nke ọdịdị ma ọ bụ egwu oge ochie n'ehihie tupu ị lakpuo ụra.
Akara maka inweta ego
Kedu esi eme ego na foto?
Na-achọ ọrụ na Ukraine
Nkwalite onwe gị - otu esi egosi onwe gị n'ụzọ mbụ ma dị irè?
Oge ọrụ - echiche na ụdị
Chi pyramid ego bụ ihe ịrịba ama nke pyramid ego na olee otu o si arụ ọrụ?
Nkwụnye ego na Intanet
Hapụ na-akwụ ụgwọ
Salad na salmon na tomato
Italian salad na onyinye
Egwuregwu okwu na nkwurịta okwu achụmnta ego
Margarine - ma ọ bụ ihe ọjọọ
Knife santoku - gini maka ya?
Goose na prunes na apụl
Zamiokulkas - akwukwo akwukwo
Salad na breadcrumbs - Ezi ntụziaka maka nri na-egbu nri crunchy
Mgbanwe nke Melania Trump style - site n'aka nwa agbọghọ nke na-enwe mmasị na nwunye nke onyeisi oche
Echepụta mbọ - ihe ọhụrụ 2016
Chihuahua - nkọwa nke ụdị
Arachnophobia - gini bu ya na otu esi tufuo arachnophobia?
Mee ka ndị na-akwa ákwà - agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ mbụ
Ebube Jeans 2015
Cheesecake na jam - echiche ndị ọhụrụ maka ịme ihe oriri na-atọ ụtọ
Arch nke La Portada
Ọ bụ ịmụ nwa - esi ghọta na ọ ga-amụ nwa n'oge na-adịghị anya?
Uwe mara mma maka ụmụ nwanyị karịa 40